Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Thailand, Dalxiiska, iyo Aagagga Cas ee Madow: Ma aha war wanaagsan
News • Dib-u-dhiska • Shopping • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Aagagga COVID ee Thailand waxay ku daraan Aagagga Cas ee Madow
Thailand diyaar uma aha inay soo dhoweyso dalxiisayaasha mar dhow. Iyada oo kala duwanaanshaha Delta uu sii fidayo, Boqortooyadu waxay xireysaa gobollo badan - tanina waxay socon kartaa bisha oo dhan.
Dowladda Thai waxay kordhisay xirida iyo tallaabooyinka bandowga laba toddobaad oo dheeri ah oo ka bilaabanaya Talaadada iyadoo 16 gobol oo dheeri ah lagu daray liiska “guduudka madow ama ugu sarreeya iyo aagagga xakamaynta adag”, aagagga ugu daran ee uu ku dhacay cudurka faafa ee Covid-19.
Xarunta Maamulka Xaaladaha Covid-19 (CCSA) ayaa amartay bandow laga bilaabo 9-ka fiidnimo –4 subaxnimo waxaana tallaabooyin kale oo adag lagu soo rogi doonaa Bangkok iyo 28 gobol oo kale oo ku yaal Thailand muddo laba toddobaad ah oo ka bilaaban doonta berri.
CCSA waxaa la filayaa inay qiimeyso xaaladda masiibada mar kale 18ka Agoosto.
CCSA si kastaba ha ahaatee waxay fududaysay xannibaadihii makhaayadaha iyo meelaha wax lagu cuno ee ku yaal suuqyada ku yaal aagagga cas ee mugdiga ah, taasoo u oggolaanaysa inay ku iibiyaan cuntada iyagoo adeegsanaya aaladaha internetka.
Xayiraadaha jira ee aagagga cas ee mugdiga ah ayaa sii jiri doona, oo ay ku jiraan xannibaadaha socdaalka gobollada.
Qof kasta oo doonaya inuu galo aagagga cas ee mugdiga ah waa inuu haystaa sabab habboon waana la baari doonaa marka uu soo galo.
Aan ka badnayn 5 qof ayaa loo oggol yahay inay kulmaan.
Suuqyada wax laga iibsado, bakhaarrada waaweyn, iyo xarumaha wax -iibsiga bulshada ayaa xiran marka laga reebo dukaamada waaweyn, farmasiyada, iyo saldhigyada tallaalka Adeegyada gaadiidka dadweynaha lama heli karo laga bilaabo 9 -ka fiidnimo –4ka subaxnimo. Awoodda gaadiidka dadweynaha ayaa ku xaddidan 50%
Dadka ku nool gobollada aagga cas ee mugdiga ah waxaa lagu boorriyay inay ka shaqeeyaan guriga.
Tallaabooyinka bandoowga iyo xiritaanka ayaa laga dhaqan geliyey Bangkok -weyn - Nonthaburi, Samut Prakan, Samut Sakhon, Pathum Thani iyo Nakhon Pathom, iyo sidoo kale afarta gobol ee xuduudda koonfureed ee Pattani, Yala, Narathiwat iyo Songkhla ilaa Luulyo 12 -keedii.
Chon Buri, Chachoengsao, iyo Ayutthaya ayaa lagu daray liiska 20 -ka Luulyo. Tallaabooyinka hadda jira waxay dhacayaan Isniinta.
CCSA ayaa shalay ku dartay 16 gobol oo dheeraad ah liiska aagga guduudka madow - Ang Thong, Nakhon Nayok, Nakhon Ratchasima, Kanchanaburi, Lop Buri, Phetchabun, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Prachin Buri, Ratchaburi, Rayong, Samut Songkhram, Saraburi, Sing Buri , Suphan Buri, iyo Tak.
Waxaa la ogaaday in heerarka caabuqa ee Bangkok ay muujiyeen astaamo hoos u dhac ah, taas oo ka dhigan 39% cudurrada dalka oo dhan halka heerarka caabuqa ee gobollada kale ay sare u kaceen kala duwanaanshaha Delta.
Dowladda Thailand ayaa isku dubarideysa soo dejinta tallaalka Sputnik ee Ruushka si ay tallaal u siiso shaqaalaha safka hore.
Khubarada caafimaadku waxay isku raaceen in heerka caabuqa ee sare ee Thailand ay u badan tahay inuu sii socdo labada bilood ee soo socota.
Thaniwan Kulmongkol, oo ah guddoomiyaha Ururka Maqaayadaha Thai, ayaa soo dhoweeyay go’aannada CCSA ee ku aaddan in makhaayadaha ku yaal suuqyada ay cuntada ku iibiyaan onlayn.
Wadanku wuxuu diiwaangeliyay 18,027 xaaladood oo cusub iyo 133 dhimasho oo cusub oo ah Covid-19 24-kii saac ee la soo dhaafay.